Forum serasera malagasy Ho potehin'i Maharante ny ENAM - Dinika forum.serasera.org
Ho potehin'i Maharante ny ENAM
Fitohizan'ny hafatra : Ho potehin'i Maharante ny ENAM
rabaradaka - 06/01/2017 08:27
Fanahy iniana hanapotika sa tsy fananana olona fa dia mahagaga raha ry MAHARANTE Jean De Dieu no mbola ministre ihany nefa ange ka dia tsy misy zvatra ataon'io olona io mihitsy e, afera maloto sy bizna no tena résultats azo tsapain-tanana ataony.
Tadiaviny potehina mihirtsy ny ENAM ankehitriny satria tao amin'ny Formation continue dia nisy havany sy olona nanao afera taminy dia tafiditra. Rehefa natao ny examen hiakarana deuxième année dia tsy nisy afaka ireo olona nanao bizna taminy na dia iray aza. Manao tery vay manta ny DG ENAM sy ny mpitantana ny ENAM ary mpampianatra vitsy vitsy izy hahatonga an'ireo olona ireo hiakatra deuxième année !
Tsy hanaiky ireo mpianatra afaka sy mahay satria hita mibaribary fa olona mahazo moyenne de 4/20 ve dia hekena hiakatra 2e année.
Mila vonjy ny ENAM satria ho potika tanteraka io sekoly manofana ho mpiasam-panjakana ambony io. Nesorin'i Maharante ny SG FOP satria io olona io dia nijoro fa tsy ekena ny hiakaran'ny olona tsy mahay sy bado ka hiditra 2e année.
Mahagaga fa olona efa fantatra fa tsy mahomby sy ratsy fiasa nefa dia mbola atao ministre ihany, ny any Tuléar tany niaviana aza tsy tia azy.
Mety hiteraka korontana ny mbola hipetrahan'io Maharante io ao amin'ny Min FOP
dodakely1 - 09/01/2017 13:01
soa dia isany lazain i rajao fa mpamadika azy i maharante,maro izy ireo,isan'izany i claudine sy maro tsy lazaina eto